Mbido AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW .KWỌ Ndị na-elekọta bọl Steven Gerrard Childhood Story Plus Ihe Na-adịghị Eke Akwukwo Nsogbu
LB na-egosi Full Story of a Football Legend kasị mara aha na aha njirimara; 'Stevie G'. Anyị Steven Gerrard Storymụaka Akụkọ ya na enweghị akwụkwọ akụkọ Eziokwu na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị a ma ama site na nwata ruo n'oge.
Nyocha nke Akụkọ Akụkọ Liverpool gụnyere akụkọ ndụ ya tupu ama aha ya, ndụ ezinụlọ ya na ọtụtụ nkwụsị na ON-Pitch amachaghị banyere ya.
Ee, onye ọ bụla maara banyere ntụgharị Stevie G mana ole na ole na-atụle ndụ ya n'èzí pitch nke bụ ihe na-atọ ụtọ. Ugbu a na-enweghị n'ihu adieu, ka anyị bido.
Steven Gerrard Childhood Story - Mmalite Ndụ na Ezinụlọ:
A mụrụ Steven George Gerrard na 30th nke May, 1980 na Whiston, Merseyside site n'aka Paul Gerrard (nna) na Julie Ann Gerrard (nne).
A mụrụ ya na nkwarụ ọmụmụ a na-akpọ 'ụkwụ ncheihu n'elu' nke mere ka agbagharia ukwu ya na (inverted) na ala. E mesoro ya oge. Ndị mụrụ ya achọghị ka ọ jee ije na nkwonkwo ụkwụ ya ma ọ bụ n'akụkụ ụkwụ ya.
Na-etolite, o nwere nsogbu nhụjuanya dị ukwuu mgbe ọ na-amanye onwe ya site na mgbake ọmịaka ya. Ọbụna ọ gafere usoro nsogbu nke nsogbu dịka nwatakịrị. Ihe ndị a nile ka ọ gbakere.
Steven Gerrard gara St Michael Primary (nke bụ Huyton-with-Roby CE). A kọwara ya dị ka onye ihere, nwata nwoke dị ka ndị nkuzi ya si kwuo.
Ọ bụ nwata mgbe niile mara mma, nwee nsọpụrụ, etolitewo nke ọma, ” onye nkuzi na-echeta. "Ma ọ bụ mgbe ọ gara ndị okenye, ihe dị ka isii, ma malite ịkụ bọl na àgwà ya pụtara.
Kwesighi ịbụ ọkachamara na bọọlụ iji hụ na ọ bụ ọpụrụiche. Ọ nọ ebe niile. Ọ hụrụ ya n'anya. Ọ dịrị ndụ ma gbaa bọlbụ. ka Gill Morgan, bụ onye nkụzi ụlọ akwụkwọ ya, kwuru.
N'oge ahụ, ndị otu ya nwere ọtụtụ ihe ịga nke ọma, ọ bụ n'ihi Steven. " Gill Morgan gara n'ihu
Egwuregwu bọlbụ bụ ihe okike maka obere Steven Gerrard. Dịka nwatakịrị nke 5, ọ zụlitere ọchịchọ dị egwu ilekwasị anya na football mgbe ọ hụrụ egwuregwu ahụ n'anya.
O sonyere na bọọlụ mgbọrọgwụ dị nso na ụlọ nke dị nso na Everton FC. Dabere na nso, ịhụnanya Steven nwere maka Everton rịrị elu. Ọ ga-eyi uwe ya mgbe niile wee gaa Goodison Park iji were trophies were foto ọtụtụ oge.
Otú ọ dị, e nwere ndọghachi azụ. Nwa okorobịa Steven Gerrard gbara anya mmiri mgbe Tolgate, otu ìgwè ụmụ nwoke na mpaghara, jụrụ ya n'ihi na ọ dị obere.
N’izu ahụ nke ịjụ ya, ọ na-ahapụkwa njem gaa Wembley na St Michaels (Ogwe osisi mgbọrọgwụ ya) mgbe ọ gbusịrị ụkwụ ya na Coke Can mgbe ọ na-anwale ihe mmịfe.
Steven Gerrard Child Story - Ihe Mberede Childhoodmụaka:
Inwe mmerụ ahụ dị egwu mgbe gị na ndị enyi ya na-egwu bọl nwere ike mechaa kwụsị ọrụ nwa okorobịa Steven tupu ya amalite.
Mgbe ndị ntorobịa na-eto eto na-eto eto, Gerrard na-eto eto kwadoro ihe mberede nke na-efu ọrụ ya. Mgbe bọl ahụ jidere na oke, ọ gara kpụpụ bọl ahụ kama kama ịgha ụkwụ n'ogige ndụdụ.
Nke a gafere akpụkpọ ụkwụ ya na nnukwu ụkwụ ya. Otu dọkịta kwuru na mkpịsị ụkwụ ya ga-achọ ibepụ. Nke a mere ka ndị mụrụ ya chọọ ọgwụ ndị ọzọ iji mee ka Steve daa ogbenye.
Mgbe nhọrọ ndị ọzọ gbasara ahụike, e gosipụtara olileanya maka ndị mụrụ ya dịka ụzọ Steve na-eto eto iji nweta mgbake zuru oke malitere ma kwụsị nke ọma.
Mgbe ọ gbakechara, Gerrard malitere igwu egwu maka otu onye otu obodo ya, bụ Whiston Juniors. N'ebe a, ndị na-egwu Liverpool hụrụ ya, ọ ga-esonyekwa na agụmakwụkwọ ha mgbe ọ dị afọ 9.
Enye ama odomo ke otu nsio nsio nsio nsio itieutom, ye Manchester United, emi enye okosiode. (ee ị gụrụ ya).
Steven Gerrard Mmekọrịta Ndụ:
Mgbe nwoke na nwanyị na-ede akwụkwọ akụkọ ejiji / ụdị Alex Curran maka afọ 5, di na nwunye ahụ lụrụ di na nwunye na 2007.
Curran amalitela ejiji ejiji ya, dee akwụkwọ edemede nke Daily Mail wee nwee ahụmahụ na ịme ihe. Di na nwunye a nwere umu 3, Lilly-Ella (2003), Lexie (2006) na Lourdes (2011).
Steven Gerrard Biography - Akwụkwọ:
Na September 2006, Gerrard bipụtara ya autobio akpọ 'Gerrard: My Autobiography'.
Akwụkwọ a gara n'ihu merie asọpụrụ Sports Book of the Year na British Book Awards.
Gerrard olu nke abụọ nke akụkọ ọdịnala ya, Akụkọ Liverpool m ' edere ya Donald McRae, e bipụtara na September 2015. Tọ autobiography-agwụ na "Ana m egwuri egwu maka Jon-Paul."
Egburu nwanne nwanne Gerrard, Jon-Paul Gilhooley na ọdachi 1989 Hillsborough mgbe Gerrard dị afọ asatọ.
Jon-Paul, bụ onye dị afọ 10 mgbe ọ nwụrụ, bụ ọdụdụ nwa nke mmadụ 96 metụtara ọdachi ahụ. Ọ bụkwa ya bụ onye ntà Liverpool.
Hismụ nwanne nne ya Paula Kadiri na Donna Ridland, bụ ndị ga-azụ ya, kọwara ya dị ka a "Nwa mara mma".
Ọ dị mkpa iburu na tnwa akwukwo ulo akwukwo St Columbus bụ nwa okoro ebe o bu aha ya na Pope.
Ọ bụ nwa nwanne nna onye isi Liverpool bụ Steven Gerrard na ndị otu ahụ ga - egwuri egwu n'oge ahụ mgbe ha bụ ụmụaka. Steven dị obere.
"O siri ike ịmata na otu onye nwanne nne m nwụrụ anwụ", Gerrard kwuru. “Seehụ mmeghachi omume nke ezinụlọ ya mere ka m bụrụ onye ọkpụkpọ nke m taa.”
Na 2015 autobiography, Gerrard kwuru na ndị egwuregwu anọ kacha mma ka ha soro ya bụ ndị otu ndị Liverpool Xabi Alonso, Fernando Torres na Luis Suárez na England onye otu Wayne Rooney.
Steven Gerrard Untold Biography Eziokwu - Onyinye Ebube:
O nwetara nkwalite otuto site n'aka Ụlọ ọrụ Liverpool John Moores na 26 July 2008 dị ka mmata maka onyinye ya na egwuregwu ahụ.
Steven Gerrard Untold Bio - Ọ kwaturu 10 afọ na Bentley na 2007:
Na 1 October 2007, Gerrard tinyere aka na nkwekọrịta dị ala Southport mgbe ụgbọ ala ọ na-anya kụrụ onye gbara afọ iri na-agba ịnyịnya, bụ onye gbagburu n'okporo ámá ma ghafee ụzọ Gerrard.
O mechara leta nwatakiri ahụ n’ụlọ ọgwụ wee nye ya otu akpụkpọ ụkwụ bịanyere aka na ya Wayne Rooney, onye ọkpụkpọ kachasị amasị nwata ahụ, mgbe nke ahụ gasịrị, ọ nọrọ iji debanye aha ndị ọzọ na-eto eto
Na 29 Disemba 2008, e jidere Gerrard na mpụga Lounge Inn na Southport na-enyo enyo nke a. mmebi nke 20. E mechara boo ya na mmadụ abụọ ebubo na mwakpo na-emerụ ahụ na mmekpa ahụ.
Nke a metụtara ihe merenụ nke hapụrụ DJ mmanya na ezé gbajiri agbaji na egbutu n'egedege ihu ya. A chọrọ Gerrard ka ọ gaa Courtlọikpe Na-ahụ Maka Liverpool na-ekpe ikpe na Liverpool ma chere ikpe ya ikpe nke ọ rịọrọ na ya emeghị ihe ọjọọ.
Ndị na-ekpechitere ya ebubo rịọrọ ikpe tupu ikpe ahụ mana Gerrard nọgidere na-adị ọcha. Gerrard kwetara na ọ tụrụ Marcus McGee aka ma kwuo na ọ bụ iji chebe onwe ya.
Na 24 July, Gerrard ahụghị ikpe site na ndị juri. Mgbe mkpebi ahụ gasịrị, Gerrard kwuru na ya na-atụ anya ịlaghachi ịgba bọl ma tinye ahụmịhe n'azụ ya. E kwere ya ka ọ laa.
Steven Gerrard Biography - Onye ọkpụkpọ nke atọ iji mee 3 ma ọ bụ karịa Njikọ Premier maka 500 klọb:
Iguzosi ike n'ezi ihe anaghị adịkarị n'ọgba egwuregwu a, ma Steven Gerrard nọrọ Liverpool na ọrụ ya nile ma nwee ọganihu dị ogologo na nke na-aga nke ọma n'ebe ahụ.
Na 25th nke Eprel, Gerrard ghọrọ naanị onye ọkpụkpọ 3 iji mee 500 ọzọ Njikọ Premier maka ụlọ 1.
Ọnụọgụ ndị egwu egwuri egwu karịa otu klọb Premier League: Jamie Carragher (508 maka Liverpool) na Ryan Giggs (632 maka Man United).
Na 2011, Gerrard pụtara na fim 'Ga-'.
Ihe nkiri a bụ ihe nwatakịrị na-eto eto Liverpool na-agba ọsọ na-atụgharị na 2005 UEFA Champions League Final.
Eziokwu Mgbaru Ọsọ:
Ọ bụ naanị ndị egwuregwu bọọlụ gbatụrụla bọọlụ n'ime asọmpi FA Cup, League Cup Final, UEFA Cup Final na Champions League nke ikpeazụ. (Ọ bụ ya mere o ji bụrụ Captain Fantastic ị maara).
N'oge a na-ede Bio a, Naanị ọnụ ọgụgụ 15 nke ndị egwuregwu enwetala ihe mgbaru ọsọ Premier League karịa Gerrard (120). Ọ bụghị ihe ọjọọ maka onye na-emebu egwuregwu.
UCL ebe nchekwa:
Mgbe Liverpool gbadara 3-0 mgbe ọkara mbụ n'oge 2005 Champions League egwuregwu, Stevie G bụ onye were ọrụ nke ịdọrọ Liverpool na egwuregwu ahụ.
O meriri isi nke mbụ nke na-akpali ha ma mesịa nye ha Champions League Championship.
O kpebiri iji obi ọjọọ mee ntaramahụhụ ikpeazụ n'oge agbapụ nke 2005 CL ikpeazụ.
Agbanyeghị na ọ gaghị ewere ya n'ihi na Shevchenko gbafuru, ọ chọrọ ịbụ onye ga-akwụ ụgwọ ntaramahụhụ ikpeazụ n'ihi na o kwenyere na ọ bụ onye isi ụlọ ọgbakọ ahụ ma yabụ na ọ bụ ọrụ ya ịta ntaramahụhụ ahụ.